Ronaldo oo kahor kulanka Genoa la gudoon siin doono abaal marintiisa ugu horeesay ee maaliyada kooxda Juventus – Gool FM
Ronaldo oo kahor kulanka Genoa la gudoon siin doono abaal marintiisa ugu horeesay ee maaliyada kooxda Juventus
Dajiye October 20, 2018
(Juventus) 20 Okt 2018. Juventus ayaa ku shaacisay website-keeda rasmiga ah in Cristiano Ronaldo uu ku guuleystay abaalmarinta laacibka bisha ee kooxda, kahor inta aysan ciyaarin maanta kulankooda 9-aad horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga xili ciyaareedkan 2018/2019.
Cristiano Ronaldo ayaa ku guuleestay abaal marintiisa ugu horeesay ee maaliyada kooxda Juventus, kadib markii uu helay codadkii ugu badnaa ee codbixinta lagu sameeyay website-ka rasmiga ah ee kooxda Juventus.
Taageerayaasha ayaa waxay u codeeyeen in Ronaldo uu yahay xidigii ugu fiicnaa bishii September ee lasoo dhaafay, kadib markii uu dhaliyay 3 gool isla markaana uu caawiyay 2 gool kale 5 kulan uu kaga soo muuqday Bianconeri bishii lasoo dhaafay.
Cristiano Ronaldo ayaa qaatay kaarka roosaha bishii September kulankii Valencia wareega hore ee tartanka Champions League, laakiin taasi kama aysan hor istaagin in taageerayaasha ay u doortaan ciyaaryahanka ugu fiicanaa kooxda Juventus.
War saxaafadeed kasoo baxay kooxda Juventus ayaa lagu xaqiijiyay in Ronaldo la gudoon siin doono abaalmarintan ka hor inta uusan bilaaban kulanka caawa ay kooxda Genoa kuwada ciyaari doonaan horyaalka Talyaaniga.
Waxaa xusid mudan in Cristiano Ronaldo uu kasoo muuqday ilaa iyo haatan safka kooxda Juventus 8 kulan ee ah horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga, wuxuu dhaliyay 4 gool, wuxuuna sidoo kale caawiyay 4 kale.
Tababare Cusub oo ku soo biiray liiska tababareyaasha badali kara Lopetegui
Guardiola oo xaqiijiyay in Manchester City ay heshiis cusub ka saxiixayso Leroy Sane